पर्यवेक्षकहरूले GPS प्रयोग गर्नु पर्छ उनीहरूको स्टाफ ट्र्याक गर्न सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर ऑटिज्म / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो स्टाफ ट्र्याक गर्न GPS प्रयोग गर्नु पर्छ
जीपीएस मार्फत मोबाइल कामदारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दा गोपनीयताको कुराले मसीको नदीहरू बगाएको छ कि त्यहाँ दुबै पक्ष, कम्पनी र वर्कफोर्सका धेरै मानिसहरू छन्, जो एउटै प्रश्न गर्दैछन्।
त्यस्ता कम्पनीहरू छन् जुन जीपीएस मार्फत आफ्नो कर्मचारीको स्थिति पत्ता लगाउन वा ट्र्याक गर्न चाहन्छ। यस जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणालीको साथ, तपाईं आफ्नो गतिविधि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ र जान्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ। तर के यो कम्पनीमा यो स्रोत प्रयोग गर्न कानूनी छ?
रोजगारदाताहरूलाई उनीहरूका कामदारहरूको अनुगमन गर्न अनुमति छ, तर केवल धेरै नै सीमित सीमाहरू भित्र। निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीहरू, जुन केवल कार्यस्थलमा मजदुरहरूको व्यवहार अनुगमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो, श्रम कानून (आर्ट। २ Ar एआरजीवी)) द्वारा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। जहाँ निगरानी आवश्यक छ, उदाहरणका लागि, चोरी रोक्न वा राम्रो योजना संचालन गर्न, तिनीहरूले कर्मचारीको आवागमन स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।
GPS बाट निगरानी अनुमति छ, गोपनीयता अधिवक्ताहरूको अनुसार। तर मात्र यदि यो आनुपातिक हो, त्यसैले कर्मचारीहरू अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण र तनावग्रस्त हुँदैनन्। नियोक्ताले, त्यसकारण, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई स्थायी रूपमा पर्दामा मात्र निरीक्षण गर्नै पर्छ, यदि यो सुरक्षा कारणका लागि आवश्यक छ भने, उदाहरणका लागि। यस्तो तथाकथित वास्तविक-समय अनुगमन अनुमति छ, उदाहरणका लागि, नगद यातायात ट्र्याक गर्नको लागि वा खतरनाक सामानहरू ढुवानी गर्दा।
कर्मचारीहरूलाई अनुगमनको बारेमा सूचित गरिएको छ र किन अनुगमन हुन्छ भनेर जानकारी गरिएको छ, कुन डाटा स is्कलन गरिएको छ, यस डाटामा कससँग पहुँच छ, उनीहरू कतिन्जेल भण्डारित छन् र कर्मचारीहरूको पहुँचको अधिकार छ।
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको कामदारलाई सूचित गर्नु हो कि ऊ जीपीएस मार्फत अवस्थित हुनेछ उसको कामको फाइदाको प्रबन्ध गर्नका लागि। यस तरिकाले, तपाईले जान्नुहुनेछ कि जीपीएसको साथ एकत्रित गरिएको डाटा प्रक्रिया अनुकूलन, वृद्धि सुरक्षा, कार्य नियन्त्रण, प्रेरणा र प्रदर्शन कार्यक्रम र सम्भावित दण्डहरु जस्ता उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रोजगारदाताहरूले GPS उपकरणहरू विभिन्न उपकरणहरूमा राख्न सक्दछन्, सवारी साधनहरू र सेल फोन सहित। यो नियोक्ता अप-एक मिनेट विवरण एक कर्मचारी को स्थान को बारे मा दिन्छ, देशान्तर र अक्षांश निर्देशांक द्वारा प्रकट, जो तब एक टीम टोलीलाई सूचित गरिन्छ जुन रोजगारदाताले अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एक सवारीमा स्थापित छ, जीपीएस उपकरण पनि सवारी को गति र दिशा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
के मजदुरलाई मोबाइल फोनमा जीपीएस राख्नु कानुनी हो?
जबसम्म फोन वा ट्याब्लेट कम्पनीको स्वामित्वमा हुन्छ र कर्मी होईन, उत्तर स्पष्ट छ: हो। अन्यथा (यदि उपकरण कर्मचारीको स्वामित्वमा छ भने) उसलाई सुचित गर्नुपर्दछ र आफ्नो टेलिफोन मार्फत अवस्थित हुन आफ्नो सहमति दिनुपर्दछ।
नियोक्तासँग जीपीएस टेक्नोलोजी छ र कम्पनी उपकरणमा राख्न सकिन्छ जुन उसको कर्मचारीले आफुसँग बोक्छ उसले श्रमिकको पूर्व सहमतिको आवश्यकता बिना नै।
GPS स्थानको लागि विचार गर्न कारकहरू
यद्यपि कर्मचारी यस चरणमा पारंगत भए पनि, तपाईं समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई बिर्सनुहुन्न त्यसैले जीपीएस मार्फत कर्मचारीलाई पत्ता लगाउने पूर्ण कानूनी छ।
संवैधानिक अदालतले यो कामदारको मौलिक अधिकार हो जुन सीमा रोजगारदाताले सम्मान गर्न पर्छ को एक श्रृंखला को स्थापना की छ। यस सन्दर्भमा, GPS ट्र्याकिंग पछ्याउने विधिहरू कानुनी हुनेछ जबसम्म उनीहरूले निम्न आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन्:
जीपीएस स्थापना को लागी प्रयोजन को लागी प्रयोजन को लागी सक्षम हुनु पर्छ।
यो उपाय आवश्यक छ किनकि समान प्रभावकारिताको साथ उद्देश्य प्राप्त गर्न अरू कुनै मध्यम उपाय छैन।
कडा अनुपातको फैसला
यो उपाय सन्तुलित हुनुपर्दछ, द्वन्द्वमा अन्य मान वा सम्पत्तिको नोक्सान भन्दा बढी फाइदा वा सामान्य चासोको फाइदाहरू।
कामदारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणाली प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर जान्नका लागि कानुनी अध्ययन गर्नु कानूनी छ र यो एकदमै स्पष्ट छ कि कुनै पनि हालतमा कम्पनीले आफ्नो कामको दिन बाहिर कर्मचारी पत्ता लगाउन सक्छ।
त्यसकारण, उपकरणहरू वा सवारी साधनहरू जसमा GPS ट्र्याकि system प्रणाली स्थापना गरिएको छ यस प्रकार्यलाई असक्षम पार्ने विकल्पमा उनीहरूले निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिनेछ।
डाटा संरक्षण कानून के भन्छ
LOPD ले यसलाई स्पष्ट बनाउँदछ कि निजी डेटाको व्यवहार गर्दा उनीहरूको रक्षा गर्नु अनिवार्य छ जबसम्म यसको विरूद्ध कुनै कानून बनाउँदैन। र मजदुर कानूनको अनुच्छेद २०. with को साथ यस्तो हुन्छ, "रोजगारदाताले उनीहरुको श्रम दायित्वहरु र कर्तव्यहरु संग अनुपालन प्रमाणित गर्न अनुगमन र नियन्त्रण गर्न को लागी सबै भन्दा उचित मानीएको उपायहरु अपनाउन सक्छ, आफ्नो गोद लिन मा राखी म लागू गर्छु। तिनीहरूको मानवीय सम्मानका कारण विचार "
जे भए पनि, यो पछ्याउँदछ, जबकि रोजगारदाताले कामदारको मोबाइलमा जीपीएस राख्न सक्छन्, यसले उसलाई विशिष्ट कर्मचारीलाई सूचित गर्ने दायित्वबाट मुक्त गर्दैन, जसलाई थाहा छ कि उसलाई "निगरानी गरिएको छ" भन्ने कुराको अधिकार छ। "
स collected्कलन गरिएको जानकारी कहिलेसम्म बचत गर्न सकिन्छ?
यस अवस्थामा, त्यहाँ प्राप्त तथ्या .्कको संरक्षणको लागि नीतिहरू पनि छन् जसले काम गर्ने अधिकारको हनन गर्दैन। अधिकतम समय कि प्राप्त जानकारी को बचत गर्न सकिन्छ २ महीना को छ, जबकि यस स्थान डाटा को लागी लामो राख्न सकिन्छ।
डाटा लामो समयको लागि सुरक्षित गरियो
यदि यो डाटा सेवाको कार्यान्वयन प्रदर्शन गर्न प्रयोग भएको छ जब कुनै प्रमाणहरू अन्य माध्यमद्वारा प्रदान गर्न सकिदैन। यस अवस्थामा तपाईले जानकारी एक बर्ष सम्म राख्न सक्नुहुन्छ।
यदि त्यहाँ निर्दिष्ट नियमन छ जुन यस अवस्थाको लागि प्रदान गर्दछ, स्थापित अवधिमा।
यदि संरक्षण सबै विस्थापनको साथ ईतिहास राख्नका लागि बनाइएको मार्गहरू अनुकूलित गर्न प्रयोग गरियो भने, यो अधिकतम एक बर्षको लागि पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
डेटा जुन नियोक्तासँग जीपीएस मार्फत हुन सक्छ
समय दिन सुरु हुन्छ
स्टपहरू बनेको घण्टा
स्थानहरू जहाँ तपाईं कम्पनीको गाडी र स्टप संग पास
टाइम्स जब कार चलिरहेको छ र जब यो रोकिन्छ
माइलेज प्रत्येक कार्य दिनमा बनाइएको
जे भए पनि तपाईको व्यक्तिगत वा पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित सबै कुरा र तपाईको गोपनीयता को दायरा संग सम्बन्धित सबै कुरा।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, जीपीएस मार्फत कर्मचारीलाई खोज्नु भनेको विशुद्ध प्रोफेशनल मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ र उनीहरूको श्रम सेवा प्रावधानको दायरा भित्र बनाउनु पर्छ।
4588 कुल दृश्यहरू4हेराइ आज
के रोजगारदाताहरूले कर्मचारीहरूलाई ट्र्याक गर्न GPS प्रयोग गर्न सक्दछन्?
कसरी तपाईंको बेइमान धोखा पति / पत्नी लाई ट्र्याक गर्ने ...